09771391484 (Yangon) English (EN)	မြန်မာ (MY)	email ပို့ရန်	Se Kyung(SK Korea Motor)	ယုံကြည်ရသော ရောင်းသူ	သင့်ရဲ့ နာမည် အီးမေးလ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Se Kyung Car Showroom ကတော့ Korea ကားအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းကိုသာ တင်သွင်းရောင်းချပေးနေတဲ့ showroom ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Se Kyung Car Showroom ကတော့ ကားကိုတင်သွင်းရောင်းချရုံသာမကပဲ ၀ယ်ယူပြီးကားများနဲ့ ပက်သက်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ကိစ္စအ၀၀ကိုပါ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ၀ယ်ယူသူများအနေနဲ့ အလွန်အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားများကို စိတ်ဝင်စား၍ လာရောက်ကြည့်ရှုလိုပါက No. (6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township နေရာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း အချိန်မရွေးဝင်ရောက်လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ၀ယ်ယူရာတွင် ကားဝယ်ယူရုံသာမကပဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတာဝန်များကိုပါ တစ်ပါတည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော နေရာကို ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက ကျွနု်တို့ မှလွဲ၍ အခြားနေရာမရှိသည့်အတွက် ယခုပင် လှမ်းလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ဆက်သွယ်ကြည့်ရှုလိုပါလျှင်လည်း Motors.com.mm မှတဆင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ပြောကြားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။” Did you know Se Kyung Car Showroom is one of the leading dealerships selling in Myanmar? We consist of an expert team that knows everything that needs to be known about the details of . You can find us and our s at your convenience within opening hours in No. (6/7), A1 Street, Mingalardon Industrial Zone, Near Aung Mingalar Highway Bus Complex, Mingalardon Township . If you happen to be looking foraplace with the following extra services: ; then you are looking in the right place. We are confident you won't findabetter deals anywhere else so do not hesitate and get in touch today. Be sure to mention Motors.com.mm when you get in touch with us! အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ
Se Kyung(SK Korea Motor) အတွက် တင်ပြထားတဲ့ အ‌ကြောင်းအရာ‌တွေမရှိ‌သေးပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး အ‌နေနဲ့ အ‌တွေ့အကြုံကို တင်ပြတဲ့သူလုပ်လိုက်ပါဦး။